Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Khamiis Ah Qoreen Wargeysyada Yurub - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Khamiis Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Maalin wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad joogtaan, sida aan inooga barateen waxaan maanta oo Khamiis ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta qaarada Yurub ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
RASMI: Kooxda AS Monaco ayaa ku guuleysatay inay dib ugu celiso France weeraryahan Wessam Ben Yedder oo ay 37 Milyan kagala wareegtay kooxda Sevilla.
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay dhigeeda Real Madrid ka codsatay saxeexa Vinicius JR haddiiba ay ka doonayaan Neymar. (AS & Marca)
Manchester United ayaa qalbi jabkii ugu weynaa ku riday Real Madrid waxayna u sheegtay in gudaha xagaagan aysan xataa ka aqbali doonin dalab 200 Milyan oo euro ah oo ay Paul Pogba kaga doonayaan. (AS)
Bayern Munich ayaa doonaysa inay Philippe Coutinho uga gargaarto dhibaatada Barcelona ku haysata iyadoo qaab amaah ah ku doonaysa haddii aan lagu darin heshiiska uu Neymar ugu soo wareegayo Barca. (Sky Deutsche)
Kooxda Roma ayaa meesha ka saartay iib kasta oo ay ku fasaxaysay Edin Dzeko waxaana ay kaliya fasaxaysaa weeraryahankeeda haddii loo ogol yahay inay Inter Milan ka hesho Mauro Icardi. (Gazzetta Dello Sport)
Napoli ayaa kusii dhawaanaysa saxeexa garabka kooxda PSV ee Hirving Lozano kaas oo ay heshiiskiisa si rasmi ah u dhammaystiri karaan Jimcaha. (Calciomercato)
Dhinaca kale Napoli ayaa doonaysa inay iska fasaxdo weeraryahan Arkadiusz Milik kaas oo aan si buuxda u qancin tababare Carlo Ancelotti walow uu 17 gool dhaliyay xilli ciyaareedkii hore. (Gazzetta Dello Sport)
Galatasaray ayaa wada hadalo ay kula wareegayso Joao Mario la furtay kooxda Inter Milan iyadoo la filayo in xiddiga ree Portugal uu gudaha xagaagan ka hayaamo kooxdiisa. (A Bola)
Galatasaraay ayaa sidoo kale doonaysa inay hal xilli ciyaareed oo amaah ah kula wareegto Steven N’Zonzi oo ka qayb ah Roma waxaana ay bilaabeen wada xaajoodkiisa sida ay ku xaqiijiyeen barahooda bulshada. (various)
Lyon, Monaco iyo PSG ayaa sii wada tartanka ay ugu jiraan saxeexa khadka dhexe ee Blaise Matuidi kaas oo sidoo kale lala xidhiidhinayo Man United. (L’Equipe)
Real Madrid ayaa isku diyaarinaysa inay qaab amaah ah ku dirto weeraryahankeeda Luka Jovic kaddib kaliya bilooyin uu kooxdeeda ka tirsanaa. (Marca)
Mario Balotteli oo hore loola xidhiidhinayay horyaalka Brazil ayaa haatan lagu soo warramayaa inuu qarka u saaran yahay u wareegista kooxda ku cusub Serie A ee Brescia. (Sky Italia)